चिटका पोका खोल्दै मेयर राणाले भने,–‘नेपालगन्जलाई यस्तो बेथितीको अखडा बन्न दिन्नौं’ - Nepalgunj Business
चिटका पोका खोल्दै मेयर राणाले भने,–‘नेपालगन्जलाई यस्तो बेथितीको अखडा बन्न दिन्नौं’
चिट सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर राणा र प्रवक्ता रिजाल ।
नेपालगन्ज, १८ बैशाख : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा धवल शमसेर राणा मंगलबार कक्षा १२ को परिक्षा अनुगमन गर्न निस्किए । उनको टोली थिए, उपमेयर उमा थामामगर, प्रवक्ता प्रमोद रिजाल, वडा अध्यक्षहरु । कार्यक्षेत्र नभएपनि नगरभित्रको ‘अभिभाकत्व’को भूमिका निभाउँदै उक्त अनुगमन टोली परिक्षा केन्द्र अनुगमनमा निस्किएको थियो । परिक्षा केन्द्र कायम भएका सरस्वती, नारायण, महेन्द्र, होप एकेडेमी, धम्बोझी, एबिसी, मोर्डन र मंगलप्रसाद माध्यमिक बिद्यालयमा पालैपालो अनुगमन गरे । मेयर नेतृत्वको टोली जतिवटा परिक्षा केन्द्रमा प्रवेश गथ्र्यो बिद्यार्थीलाई बिनम्रतापूर्वक ‘चिट बुझाए कारवाही नगर्ने’ ’ आग्रह गथ्र्यो । ‘कारवाही नगर्ने’ भनेपछि बिद्यार्थीले पनि आफुसंग भएको चिट एकपछि अर्को गर्दै टेबुलमा राख्थे । ‘कसैले मोजाबाट त कसैले खल्तीबाट चिट निकाले’ उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले सुनाए–‘एकैछिनमा चिटको खात लाग्यो ।’
एउटा मात्र होइन अनुगमन टोली जहाँ जान्थ्यो त्यहीबाट चिट बरामद गथ्र्यो। त्यसरी बरामद भएको चिटले ठुलो प्लाष्टिकको तीनवटा झोला भरिएका थिए । सोमबार कक्षा १२ को भौतिक शास्त्रको परिक्षा थियो । पूर्व सुचना पाएरै जनप्रतिनिधिको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको थियो । ‘कसैले यसरी परिक्षा अनुगमन गर्नु उपमहानगरको कार्यक्षेत्र होइन पनि भनेका छन्’ प्रवक्ता रिजालले भने,–‘कार्यक्षेत्र भए पनि नभएपनि हामी हाम्रो उपमहानगरभित्र कुनै पनि परिक्षालाई यसरी बेथिती तरिकाले सन्चालन भएको देख्न सक्दैनौ ।’ कार्यक्षेत्रको प्रश्न उठाएर केही परिक्षा केन्द्रका प्रमुख जनप्रतिनिधिको टोलीलाई अवरोध समेत सिर्जना गरेको थियो ।
परिक्षाको अनुगमनपछि मेयर नेतृत्वको टोली उपमहानगरपालिकामा फर्कियो । परिक्षाको यस्तो बेथिती आमजनतालाई जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गर्ने योजना बुन्यो । दिउँसो तीन बजे उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परिक्षाको बेथिती सार्वजनिक गरिएको छ । ‘ओहो ! परिक्षा सन्चालनको अवस्था त भयावह रहेछ’ चिटका पोका पत्रकारलाई देखाउँदै मेयर राणाले भने–‘यसरी परिक्षा चलाएर हामी देशलाई कस्तो जनशक्ति दिदै छौ ? तर हामी नेपालगन्जलाई परिक्षाको बेथितीको केन्द्र बनाउन दिन्नौ ।’
‘सेटिङ्ग’ मा परिक्षा
अनुगमन टोलीले संस्थागतरुपमा ‘सेटिङ्ग’ मिलाएर नेपालगन्जमा परिक्षा सन्चालन हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । मेयर राणाले भने,–‘एउटा वा दुईवटा विद्यार्थीले चिट चोरेको भए उसको गल्ती भन्न सकिन्थ्यो । यहाँका जहाँ गयो त्यही चिट भेटिन्छ । सेटिङ्ग बिना कसरी सम्भव छ ?’
गार्ड र प्रहरी माथि प्रश्न ?
उपमहानगरपालिकाले परिक्षा सन्चालनका लागि राखिएका शिक्षक गार्ड र सुरक्षा निकाय माथि प्रश्न तेर्साएको छ । सुरक्षाकर्मी र गार्डलाई छलेर बिद्यार्थीले कसरी चिट परिक्षाहलमा लगे ? उनीहरुको प्रश्न छ ।
कार्यक्षेत्र भन्दैमा परिक्षामा जथाभावी हुन दिन्नौ
उपमहानगरपालिकाले गरेको छड्केप्रति प्रश्न उठेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्र हुने जुनसुकै परिक्षाको बेथिती रोक्न कार्यक्षेत्र नहेर्ने मेयरले स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने,–‘जसको कार्यक्षेत्र हो उसले जथाभावी परिक्षा सन्चालन गर्दा पनि हामी हेरेर बस्दैनौ । नेपालगन्जलाई जथाभावी परिक्षा सन्चालन हुने अखडा बनाउन दिन्नौ ।’
चिट बरामद होइन अब कारवाही
अहिले त उपमहानगरपालिकाको टोलीले चिट बरामद मात्र गरेको छ । आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने र चिट चोर्ने बिद्यार्थीलाई निष्कासन गर्ने तहसम्म जाने मेयरले बताए । उनले लापरवाही गर्ने शिक्षकलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने पनि बताए ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख १७, २०७६ 5:36:59 PM